Julian Draxler oo noqday xiddiga saddexaad ee ugu mushaarka badan kooxda PSG – Gool FM
(Paris) 29 Dis 2016 – Wargeyska Kicker ee ka soo baxa Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga Jarmalka ah ee Julian Draxler oo dhawaan ku biiray kooxda PSG uu yahay laacibka saddexaad ee ugu mushaarka badan naadigaasi.
Draxler oo mushaar ahaan bishii u qaata 850,000 oo Euro ayaa waxaa dhanka mushaaraadka billaha ah ee kooxda PSG kaga sarreeya kaliya Thiago Silva iyo Angel Di Maria.
Ciyaaryahan Draxler oo laga soo qaatay Wolfsburg ayey kooxda PSG ku soo gadatay 42 Milyan oo Euro, waxaana 23-sano jirkaan xulka qaranka Jarmalka uu mushaar ahaan bishii uga qaadan doona PSG 850,000 oo Euro oo ay ku jiraan canshuuraha.
Waxaa dhanka mushaaraadka billaha ah ee laga qaato kooxda PSG ciyaaryahan Draxler kaga sarreeya Thiago Silva oo qaata 1.1 Milyan oo Euro iyo Angel Di Maria oo bishii PSG ka qaata 900,000 oo Euro.
Laakiin Draxler oo 23-sano jirka ah ayaa mushaarka billaha ah ee laga qaato bishii kooxda PSG kaga sarreeya weeraryahanka kooxdaas ee Edinson Cavani, kaasoo bishii PSG ka qaata 800,000 oo Euro, balse waxaa la filayaan in dhowaan uu Cavani heshiis cusub u saxiixo kooxda ku ciyaarta garoonka Parc des Princes oo mushaarka loo kordhiyo.
Alexander Lacazette oo loo loo magacaabay xidigga sanadka ee kooxda Lyon